Maalinta: Ogast 7, 2017
Karaosmanoglu: Dhibaatooyinka ku jira tareenka ayaa la go'aamin doonaa
Duqa Kocaeli İbrahim Karaosmanoğlu, oo martigaliyay madax goboleedyada xisbiyada siyaasadeed ee Kocaeli, wuxuu kaloo dhagaystay soo jeedinta badhasaab goboleedyada ku saabsan magaalada Degmooyinka Dowladaha Dunida Turkiga (TDBB) iyo Duqa Magaalada Kocaeli [More ...]
Xaddiga Gaajadu wuxuu ahaa Hantid 713
Sarkaalka-Sen si joogto ah la qabtaa bil walba "by gaajo-saboolnimada" cilmi, marinka gaajo dadka ee ah 4 1.713,7 TL qoyska ee Turkey, line saboolnimada ee loo dejiyey £ 4.801,17. Waxaa qoray Xaqiijinta Saraakiisha-Sen midkasta [More ...]
Labo farsamo ayaa loo diray dhimasho sida isha
Ka gadaal shilka tareenka ee sababay geerida mashiinka '2 mashiinka Elazığ' waa been hamiga dayaca iyo faa'iidada xad dhaafka ah. Jimcihii, degmada Baskil ee Elazig, 2 ayaa la hadashay wargeyskeena oo ku saabsan shilka tareenka ee dilay darawalka. [More ...]
Bursaray waxay isu diyaarineysaa inay la kulanto tareen xawaare sare ku socda: Wadada ayaa ka leexatay Balat ilaa Saldhigga tareenka ee Bursa oo ku yaal koonfurta wadada laamiga ah ee Mudanya iyadoo la raacayo tilmaamaha Duqa Magaalada Recep Altepe kaas oo qaaday tallaabada is dhexgalka tareenka xawaaraha sare ee gaadiidka Mudanya Wadada Mudanya. [More ...]
Tareenka xawaaraha sare leh ee TCDD ayaa lugaha siinaya lugaha bisha Sebtembar, Mudanya Waddo ayaa ciriiri doonta hal haad oo ka mid ah saldhigga tareenka ee Balat oo ka sarreeya dhulka isla markaana la dhameystirayaa TCDD, ka dib marka uu jilco jilicsan. [More ...]
Mashaariicda lagu hormarinayo tareenka Waddada Mudanya iyo Gaadiidka Baabuurta!
Waxay umuuqataa… Waa inaanan iska indho tirin tan: Bursa waxay leedahay laba irdood oo u furan Istanbul. Mid ka mid ah irdahan ayaa ah Wadada hore ee Yalova, oo hadda loo yaqaan Istanbul Street sida wadada. [More ...]
Antalya Metro Waa Lagu Qaban Karaa 2019
Mashruuca tareenka dhulka hoostiisa mara, kaas oo Dawladda Hoose ee Antalya ay damacsan tahay inay keento gaadiidka magaalada, ayaa ka dambeeya 2019. Duqa magaalada Menderes Türel, doorashooyinka Antalya Metro 2019 waxaa loo bixin doonaa sidii ballanqaad, ayuu yidhi. Mashruuca tareenka dhulka hoostiisa laga hirgaliyo Antalya iyo kan saddexaad [More ...]
Apaydin: da Hero Railways 15 Taariikhda Taariikhda Luulyo Ap
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa ApaydınBishii Agoosto, majaladda Raillife waxay daabacday maqaal cinwaan looga dhigay "Kahraman Demiryolcular 15 waxay sameysay taariikhda bishii Luulyo". Waa tan maqaalka TCDD GENERAL MANAGER APAYDIN ​​160 wuxuu ka tagay sanadka, [More ...]
Wasiirka Arimaha Bulshada: Inden Our Way 15 Lighter than ka hor inta Luuliyo X
Arrintii bishii Agoosto ee Raillife, Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta, ayaa daabacay maqaal cinwaan looga dhigay uz Our Way 15 way ka sii fiicantahay tii hore kahor July ”. Laga soo bilaabo ARSLAN ilaa MINITTER Habeenki hore 15 Luulyo [More ...]
Deutsche Bahn ayaa amartay 250 milyan oo Euro oo loogu talagalay Siemens Howlwadeenka tareenka Jarmalka Deutsche Bahn wuxuu amar ku siinayaa Siemens wadarta xaraashka 250 oo qiimihiisu yahay Euro 60 milyan. Gaadiidka xadka [More ...]
Sharaxaadda qolalka ku saabsan dhibaatada taraafikada ee Trabzon waxay noqotay dhibaato daba-dheeraaday midba midka kale wuu raacay. Kadib madaxweynaha Rugta Trabzon ee naqshadeeyayaasha Gürol Ustaömeroğlu, Madaxweynaha Rugta Trabzon ee Injineerada madaniga ah iyo Gudoomiyaha Golaha Magaalada Mustafa Yaylalı [More ...]